Edere site Tranquillus | Oct 10, 2018 | Office
Ọrụ Google ma ọ bụ MyActivity bụ ịchọta ihe omume gị na Google yana ọrụ Google niile dịka Google Map, YouTube, Kalinda Kalinda na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ metụtara njikọ a nke weebụ.
Ihe kachasị mkpa nke Ọrụ Google nwere akụkọ ihe omuma banyere ọchụchọ gị na ọrụ ntanetị na ọrụ Google, ụzọ dị mma ịchọta ọchụchọ gị, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ ịchọta vidiyo YouTube ị na-ele n'ihu.
Google na-egosikwa akụkụ nche nke nhọrọ a. Ebe ọ bụ na Ọrụ Google na-echekwa ọrụ niile na akaụntụ gị, ị nwere ike ịchọpụta ozugbo ma ọ bụrụ na mmadụ na-eji akaụntụ Google gị ma ọ bụ kọmputa gị n'enweghị ihe ọmụma gị.
N'ezie, ọbụlagodi n'oge mbanye anataghị ikike ma ọ bụ izu ohi njirimara, ị ga-enwe ike igosipụta ojiji aghụghọ nke akaụntụ gị site na Ọrụ Google. Ọ bara uru ma ọ bụrụ na ịnwee ọnọdụ dị mkpa nke enwere ike imebi ma ọ bụrụ na onye nke atọ jiri ya; karịsịa na ọkwa ọkachamara.
Kedu ka m ga-esi nweta Ọrụ Google?
N'amaghị ya, o yikarịrị ka ị nwere ọrụ Google! N'ezie, a malitere ngwa ahụ ozugbo ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ Google (nke ị nwere ike ịmepụta dịka ọmụmaatụ site na ịmepe adreesị Gmail ma ọ bụ akaụntụ YouTube).
Iji ruo ebe ahụ, gaa Google, họrọ ngwa "Ihe omume m" site na ịpị ntanetị n'elu aka nri ihuenyo ahụ. I nwekwara ike ịga ebe ahụ ozugbo site na njikọ ndị a: https://myactivity.google.com/myactivity
GỤỌ Atụmatụ Excel Akpa Nkebi-Doping Your Productivity
Ị ga-enwe ike ịnweta ozi dịgasị iche iche, akụkọ zuru ezu banyere ọrụ gị, ọnụ ọgụgụ maka nkesa nke iji mmemme dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa ma ọ bụ na-adịchaghị mkpa. Nweta bụ ngwa ngwa ma dị mma, ị nweghị ihe ngọpụ ka ị ghara ịga ebe ahụ ma lelee ọrụ gị mgbe niile.
Kedu ka m ga-esi jikwaa akụkọ mmemme m?
Ebe ọ bụ na ọrụ Google ejikọrọ na akaụntụ Google gị ma ọ bụghị na kọmpụta gị ma ọ bụ smartphone, ị gaghị enwe ike ihichapụ akụkọ ihe nchọgharị nke kọmputa gị ma ọ bụ gaa na nzuzo iji tọgharịa ozi nlekota akaụntụ gị.
Ọ bụrụ na ị bụ karịa otu iji jiri akaụntụ Google ahụ, ị ​​nwere ike ịchọrọ idebe ogige gị maka ihe nke aka gị ma ị ga-achọ ịchọpụta ma ọ bụ wepu ngwa a na-ekpochapụ ọrụ gị. N'ezie, ime ihe a nwere ike iwe iwe, ma e nwere ngwọta.
Atụla ụjọ, Google na-enye gị ka ị gaa Dashboard nke ngwa ahụ iji hichapụ ụfọdụ ozi igodo na ịpị ole na ole ma ọ bụ naanị iji mechie nsuso ọrụ site na ịpị "njikwa ọrụ" na-achọpụta ihe ọ bụla ịchọrọ ide “ihe nzuzo” mgbe ị nọ n’ onntanet.
Ya mere, ma ihe a ma ọ bụ na ị na-enupụ isi na ize ndụ ịnweta ụdị ọrụ a, jiri ọsọ gaa ọrụ Google ma hazie nlekota nke akaụntụ gị ka ọ masịrị gị!
GỤỌ Nhazi software
Ọrụ Google, maọbụ otu esi amata ihe niile banyere ọrụ gị metụtara Google na ọrụ dị iche iche. Ọnwa Abụọ 24, 2022Tranquillus
gara agaHichaa profaịlụ Facebook gị, ghọta mkpa ọ dị netwọkụ mmekọrịta maka onyonyo gị.
-esonụChọta AccountKiller, nduzi nduzi zuru ụwa ọnụ nke na-enyere gị aka ịkwụsị akaụntụ ndekọ.